Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Causes of sudden weight loss ကိုယ်အလေးချိန် မထင်မှတ်ဘဲ ဘာလို့ကျသလဲ
Causes of sudden weight loss ကိုယ်အလေးချိန် မထင်မှတ်ဘဲ ဘာလို့ကျသလဲ
မေးခွန်း ဘာသာပြန် = အသက် ၂၃ နှစ် ကျန်းမာနေတဲ့ ယောက်ျားတယောက် အလေးချိန် မထင်မှတ်ဘဲ ကျလာတာ ဘာလို့ပါလဲ။ သွေးသကြားဓါတ်လဲနည်းနေပါတယ်။
1. Diabetes ဆီးချို
ဆီးသွားတဲ့အကြိမ်ပိုများမယ်။ ရေငတ်မယ်။ ဆာလောင်မယ်။ အမျိုးအစား (၂) ဆိုရင် ကိုယ်အလေးချိန်တက်ပြီး (၁) ဆိုရင် ကျမယ်။ အားယုတ်မယ်။ အနာတော်တော်နဲ့မကျက်နိုင်ဘူး။
2. Depression စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း
စိတ်မူပြောင်းမယ်။ ဝမ်းနည်းတာများနေမယ်။ စိတ်တိုမယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျမယ်။ အလုက်-ကျောင်းပျက်မယ်။ ပျော်ရွှင်မှုနည်းမယ်။ အိပ်မပျော် ဒါမှမဟုတ် အကြာကြီးအိပ်မယ်။ အနုတ်သဘောသာထင်မြင်ပြောဆိုနေမယ်။ သတ်သေချင်စိတ်ဝင်လာမယ်။
3. Overactive thyroid လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်းများခြင်း
လည်ပင်းကြီးအကျိတ်ကနေ ဟော်မုန်းတွေထုတ်ပေးနေတယ်။ သူ့ကြောင့် နှလုံးခုန်နှုန်းနဲ့ ကယ်လိုရီ အသုံးပြုမှုတွေကို သက်ရောက်စေတယ်။ ဒါ့ပြင် ကယ်လ်စီယမ်ကိုထိန်ချုပ်ပေးတဲ့ဟော်မုန်းလဲ ထုတ်ပေးတယ်။ အဲလိုများနေသူတွေမှာ နှလုံးခုန်မြန်နေမယ်။ ရင်တုန်မယ်။ မူမမှန်ဖြစ်မယ်။ မျက်နှာနီမြန်းနေမယ်။ ချွေးပိုထွက်မယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျမယ်။ အသက်ရှူတာတိုမယ်။ ဆောက်တည်ရာမရလုပ်တတ်တယ်။ အားယုတ်မယ်။ စိတ်တိုမယ်။ ပူတာမကြိုက်ဖြစ်မယ်။ မျက်လုံးပြူးလာမယ်။ ကလေးမရနိုင်ဖြစ်မယ်။ လိင်စိတ်နည်းမယ်။
4. Tuberculosis တီဘီ
တီဘီဟာ နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်တယ်။ အဆုပ်၊ ခါးရိုး၊ အူ၊ ကျောက်ကပ်နဲ့ ဦးနှောက်မှာဖြစ်နိုင်တယ်။ ချောင်းဆိုးမယ်။ သလိပ်ထဲသွေးပါနိုင်တယ်။ ရင်ပတ်အောင့်နိုင်တယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျလာမယ်။ ကိုပူမယ်။ ညချွေးထွက်မယ်။
5. Chronic obstructive pulmonary disease နာတာရှည် အဆုပ်လမ်းပိတ်ဆို့ရောဂါ
လေသွားလမ်းကို တနည်းနည်းနဲ့ပိတ်စေတဲ့ရောဂါတွေကိုစခေါ်တာဖြစ်တယ်။ အသက်ရှူခက်မယ်။ နာတာရှည် လေပြွန်ရောင်တာလဲ ပါတယ်။ အသက်ရှူသံက စီစီ စီစီသံထွက်နေမယ်။ အသက်ရှူတိုမယ်။ ရင်ကြပ်မယ်။ ပါးစပ်နှုပ်ခမ်းနဲ့ ခြေသည်းလက်သည်းတွေပြာနေမယ်။ မောပန်းမယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် နောက်ပိုင်းမှာ ကျလာမယ်။
6. Crohn’s disease (ခရုန်း) ရောဂါ
Inflammatory bowel disease (IBD) အူရောင်တာလို့လဲခေါ်တယ်။ ဗိုက်အောင့်မယ်။ ဆိုးတိုးဝါးဝါးဝမ်းပျက်မယ်။ အာဟာရချို့တဲ့မယ်။ ကြီက်တက်မယ်။ စားချင်စိတ်နည်းမယ်။ ဝမ်းထဲ အနာဖြစ်လို့ သွေးပါမယ်။
7. Addison’s disease (အယ်ဒီဆင်) ရောဂါ
ကျောက်ပ်အထက်မှာရှိတဲ့ (အဒီနယ်) အကျိတ်ကနေထုတ်ပေးနေတဲ့ ဟော်မုန်းတွေနည်းနေတဲ့ရောဂါဖြစ်တယ်။ cortisol နဲ့ aldosterone တွေဖြစ်တယ်။ကိုယ်အလေးချိန်ကျမယ်။ အားယုတ်မယ်။ ကြွက်သားအားနည်းမယ်။ သွေးဖိအားကျမယ်။
8. Cancer ကင်ဆာ
ဆကိုယ်လုံး ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်၊ ကင်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ အမျိုးအစားအလိုက် ခံစားရမှာ မတူဘူး။ များသောအားဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကျမယ်။ အားယုတ်မယ်။ ညချွေးထွက်မယ်။ တက်စေ့တွေရောင်မယ်။
9. HIV / AIDS အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ
HIV ပိုးဝင်ကာစ တုပ်ကွေးလိုသာခံစားရမယ်။ AIDS ဝင်လာရင်တော့ ရောဂါလက္ခဏာတွေ အမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျမယ်။
10. Parkinson’s disease (ပါကင်ဆန်) ရောဂါ
ဆိုးဆိုးလာတဲ အာရုံကြောရောဂါဖြစ်တယ်။ ကိုယ်နဲ့ မျက်နှမှာ တင်းတောင့်နေမယ်။ သွားလာလှုပ်ရှားမှုနှေးမယ်။ ပျောက်အောင်ကုမရပေမဲ့ ဆေးကုရင် ခံစားရတာတွေကို သက်သာစေမယ်။ ကိုယ်ကိုထိန်းရတာခက်မယ်။ မျက်တောင်ခပ်တာ၊ ရီတာကအစ အလိုလိုထိန်းနိုင်တာတွေ ခက်ခဲလာမယ်။ လမ်းသွားလို့လက်လွှဲတာ၊ စကားပြောတာတွေ ခက်တာမယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျမယ်။